China Tumble Shot Blasting Machine Manamboatra sy mpamatsy - Puhua
Home > Products > Milina fanapoahana tifitra
Tumble Shot Blasting Machine dia mety amin'ny fanadiovana amin'ny faritra samihafa. Ny faran'ny fanariana metaly isan-karazany dia diovina amin'ny fasika, ny faritra ambonin'ireo ferrous dia very maina.
Tumb Shot Blasting Machine miaraka amin'ny kalitao fanadiovana tsara, fohy ny fotoana, matevina, ambany ny tabataba, tombony tsara. Mihatra indrindra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana an-tsokosoko, fanadiovana, ampahany aluminium, faritra nohomboana, kodiarana sy loharanon'ny fasika, harafesina, fidinana ary fanamafisana ny tany, fa mihatra amin'ny karazana fitaovana enti-miasa rehetra koa.
Indrindra fa noho ny tahotra ny mikasika ireo faritra, ny fanadiovana sy ny fanamafisana no azo ampiharina kokoa. Ny milina fanapoahana karazana Crawler-type ho an'ny ambaratonga famokarana samihafa, ny fampiasana azy irery, dia mety ho fampiasana maro. Ary ny mpanera mitohy, toy ny fanohanana ny famokarana tsipika fivoriambe fanadiovana, no fitaovana fanadiovana tsara indrindra ho an'ny fanadiovana lehibe sy salantsalany.
Ny milina fanapoahana lohataona coil dia ampiasaina amin'ny casting amin'ny rindrina manify, vy matevina ary vy marefo na casting aluminium, seramika ary faritra kely hafa.
Blasting Machine Drum Ity andiany ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tany, fanesorana ny harafesina, vokatra mihamafy amin'ny karazan-tsolika antonony sy kely, fanoratana sy milina. Mety ho an'ny ambaratongam-pahefana samihafa izy io, afaka miasa tokana na salantsalany ary habe bitika kely. Q32 Series mikapoka fehin-kibo milina fanapoahana masinina manana tombony amin'ny mandroso famolavolana, antonony rafitra, ambany angovo fandaniana ary avo fahombiazana.
Tumb Blast Machine Ity andiany ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny tany, fanesorana ny harafesina, vokatra mihamafy amin'ny karazan-tsivana antonony sy madinidinika, fanaovana hosoka ary milina. Mety ho an'ny ambaratongam-pahefana samihafa izy io, afaka miasa tokana na salantsalany ary habe bitika kely. Q32 Series mikapoka fehin-kibo milina fanapoahana masinina manana tombony amin'ny mandroso famolavolana, antonony rafitra, ambany angovo fandaniana ary avo fahombiazana.
Tumb Belt Shot Blasting Machine Rubber track nitifitra milina fanapoahana tamina kalitao fanadiovana tsara, fohy ny fotoana, matevina, tabataba ambany, tombony tsara. Mihatra indrindra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana an-tsokosoko, fanadiovana, ampahany aluminium, faritra nohomboana, kodiarana sy loharanon'ny fasika, harafesina, fidinana ary fanamafisana ny tany, fa mihatra amin'ny karazana fitaovana enti-miasa rehetra koa. Indrindra fa noho ny tahotra ny mikasika ireo faritra, ny fanadiovana sy ny fanamafisana no azo ampiharina kokoa. Ny milina fanapoahana karazana Crawler-type ho an'ny ambaratonga famokarana samihafa, ny fampiasana azy irery, dia mety ho fampiasana maro. Ary ny mpanera mitohy, toy ny fanohanana ny famokarana tsipika fivoriambe fanadiovana, no fitaovana fanadiovan......
Easy-Maintainable Milina fanapoahana tifitra dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Milina fanapoahana tifitra dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Milina fanapoahana tifitra miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.